Miss Zimbabwe USA to join Miss Zimbabwe race - NewZimbabwe.com Miss Zimbabwe USA to join Miss Zimbabwe race - NewZimbabwe.com
Miss Zimbabwe USA to join Miss Zimbabwe race
THE Miss Zimbabwe pageant is expected to be a hot contest this year with revelations the winner of the Miss USA pageant will participate in the Harare contest.
Miss Zimbabwe USA organiser, Patience Muzanenhamo-Lusengo, revealed in a recent statement that the pageant will take place in Atlanta Georgia, on May 27, the winner of which will proceed to Harare for the main Miss Zimbabwe pageant.
“This year, we are excited to announce that our winner and 1st princess will be competing in Miss Zimbabwe beauty pageant in Zimbabwe” Muzanenhamo-Lusengo said.
She said the pageant was open to people of Zimbabwean origin or have least one Zimbabwean parent by birth, citizenship, or registration, aged between 17 and 24vand living anywhere in the USA, adding that entries were now open for those wishing to participate.
Muzanenhamo-Lusengo said the pageant, launched in 2000, had become the most prestigious, most looked forward to and respected pageant on the calendars of Zimbabweans living in the USA.
“The Miss Zimbabwe USA 2017 organiser, endeavours to elicit and crown a young Zimbabwean woman with beauty, intelligence, purpose and one that can support, uplift and assist the Zimbabwean community in the American diaspora and our fellow countrymen back home in.”
The Miss Zimbabwe UK winner will also be participating in the Miss Zimbabwe pageant to be held in Zimbabwe.Advertisement